Football Khabar » रोनाल्डो इन्स्टाग्रामबाट सर्वाधिक कमाउने खेलाडी : मेस्सी र नेइमारको स्थान कहाँ ?
रोनाल्डो इन्स्टाग्रामबाट सर्वाधिक कमाउने खेलाडी : मेस्सी र नेइमारको स्थान कहाँ ?
इटालियन युभेन्टस तथा पोर्चुगलका फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्वमा सामाजिक सन्जालमा सर्वाधिक धेरै फलोअर्स भएका खेलकुद सेलिब्रेटीमा पर्छन् । उनलाई विभिन्न सामाजिक सन्जालमा पछ्याउने संख्या करोडमा छ ।
हालै ‘होपर’नामक संस्थाले सन् २०१९ को हालसम्मको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर सार्वजनिक गरेको सूचीमा रोनाल्डो इन्स्टाग्राामा सबैभन्दा बढी हेरिने र पोस्टबाट धेरै कमाउने खेलाडीको सूचीमा पहिलो नम्बरमा परेका छन् । रोनाल्डो इन्स्टाग्रामका पोस्टमा सर्वाधिक धेरै ‘पिपुल रिच’ पाउने खेलाडी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
खेलकुद विधाअन्तर्गत इनस्टाग्रामबाट सर्वाधिक धेरै कमाउने रोनाल्डोले हरेक पोस्टबाट कम्तीमा ८७५ युरो (नेपाली करिब १ लाख १० हजार रुपैयाँ) आम्दानी गर्छन् । कुनै पनि खेलकुद सेलिब्रेटीले कमाउनेभन्दा बढी हो ।
रोनाल्डोपछि दोस्रो स्थानमा फ्रेन्च क्लब पिएसजी तथा ब्राजिलियन स्टार नेइमार रहेका छन् । उनले प्रतिपोस्ट ६४८ युरो कमाइ गर्छन् । यता, स्पेनिस बार्सिलोनाका लिओनल मेस्सी भने धेरै कमाइ गर्नेमा तेस्रो नम्बरमा मात्रै छन् ।
अर्जेन्टिनी मेस्सीले इन्टाग्रामबाट प्रतिपोस्ट ५८२ मिलियन युरो कमाइ गर्छन् । फुटबल खेलाडीले सामाजिक सन्जालमा गरिएका पोस्टबाट पैसा कमाउने त्यस्ता पोस्ट व्यापारिक विज्ञापनसँग सम्बन्धित पोस्टहरू हुन्छन् । आफूले सेयर गरेका सामग्रीका लागि सम्बन्धित कम्पनीहरूले खेलाडीलाई निकै आकर्षक पैसा तिर्ने गर्छन् ।
इन्स्टाग्राममा रोनाल्डोलाई फलो गर्नेको कूल संख्या १७६ मिलियन रहेको छ । त्यस्तै, नेइमारको फलोअर्स संख्या १२३ मिलियन र मेस्सीको १२६ मिलियन छ ।
इन्स्टाग्राममा रोनाल्डोलाई पछ्याउनेको संख्या नेइमारको भन्दा ५३ मिलियन र मेस्सीको भन्दा ५० मिलियन बढी छ ।
प्रकाशित मिति ८ श्रावण २०७६, बुधबार १५:१४